Ibali leBricMaker |
Uyikhetha njani ithonti efanelekileyo ngokweemeko zekhaya?
Okwangoku, ezona zixhobo ziphambili zokwenza izitena zodongwe kunye neethayile e-China yitonnil kunye nomlilo ojikelezayo. Itonela ikhandlela ineentlobo ezahlukeneyo kwaye zinokuhlelwa ngokusekwe kwiimpawu ezahlukeneyo: inokuhlelwa njengamacandelo eminqamlezo amakhulu ...
Uyenza njani uyilo olufanelekileyo lweziko?
Nokuba uyilo lweziko lusengqiqweni kwaye lufezekile, kuthintela ngqo abatyali mali kwaye kuthintela nomgangatho weziko. Ngokuthelekisa okuninzi phakathi kwemigca eyahlukeneyo yemveliso, sifumanise ukuba uhlobo olufanayo lwezinto eziluhlaza kunye nohlobo olufanayo lwekil ...